Burmese SXAE-280 ပွိုထုံးစံလုပ်အပြည့်အဝအလိုအလျှော
မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် Cylinder ပုံစံအရာဝတ္ထု, ဖန်သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်အပေါ်ပူစိုင်းပုံရိပ်နှင့်ဂရပ်ဖစ်။ စပျစ်ရည်ကိုဖန်ပုလင်း, အရက်ဖန်ပုလင်း, အဖျော်ယမကာဖန်ပုလင်း, ဖန်ပြွန်အခြားဖန်များနှင့်ပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာ။
ပုလင်းလွှဲပြောင်းရန် 1.mechanical ကွင်းဆက်-စတိုင်။ ရိုးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံ, လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေးအနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, တိကျမှန်ကန်မှတ်ပုံတင်မြင့်မားအလိုအလျောက်မြန်ဆန်ပုံနှိပ်ခြင်း။
2. စက်မှုမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အမြင်အာရုံအမှတ်အသားမှတ်ပုံတင်။ တိကျမှန်ကန်မှုမှတ်ပုံတင်ရန်ရာဆွဲမှအရောင်။
မော်နီတာစနစ်, တည်ငြိမ်, လုံခြုံ, မြန်နှုန်းမြင့်အပြေးစက်မျိုးနှင့်အတူ 3. PLC နှင့်ထိတွေ့မျက်နှာပြင် Display, ။
လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့အသငျ့ 4. :
အော်တို Flame ဟာကုသမှု;
ခရမ်းလွန်သို့မဟုတ် LED ကိုခရမ်းလွန်တင်နိုင်သည့်စနစ်။
6. အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ၏အမှတ်တံဆိပ်ထိုင်ဝမ်, ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, အမေရိကန်နှင့်ဂျပန်, အရည်အသွေးကောင်းရှိပါတယ်။
အီးနှင့်အတူ 7. လုံခြုံမှုစစ်ဆင်ရေး
ပုံနှိပ်မြန်နှုန်း: 1200 ပိုငျးပိုငျး / နာရီ (ကွဲပြားခြားနားသောအသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်ပုံနှိပ်ပုံရိပ်ကိုများအတွက်ချိန်ညှိ)
စက်အတိုင်းအတာ: L ကို 3400 * W က 1200 * H ကို 2200mm
Power: AC အ 380V, 3-အဆင့်, 50Hz / 60Hz, 6Kw (သာမန်ခရမ်းလွန်), 3Kw (LED ခရမ်းလွန်)
စနစ်က optional ကို R u0026 D ကိုအပြည့်အဝအလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ကိရိယာများရေတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလျှောတံခါးလုံခြုံရေးစနစ်, ။
ဝိုင်းလေး / သယ်ဆောင်ကြိုးယူနစ်လျင်မြန်စွာအလျင်အမြန်ပိုထိရောက်ထုတ်လုပ်မှု changeover, အရည်အသွေးကောင်းချုပ်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်ကွင်းဆက်အမျိုးအစားမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် Imprint ပစ္စည်းကိရိယာများစက်ရုံတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။